Ukubuyiselwa kwefanitshala yeArt Deco - I-Antique Isixhobo Uphando
Ukubuyiselwa kwefanitshala yeArt Deco
Ukubuyiselwa kwefenitshala yobugcisa kungabuyisa ubomi obutsha kunye nokubengezela kweziqwenga zakho, nokuba ziyinxalenye yokuqokelelwa kwefenitshala yobugcisa okanye isiqwenga esinye okanye ezibini apha naphaya. Uninzi lweziqwenga zobugcisa bezakhiwo zakhiwe ngokugquma okungafunekiyo kunye nezixhobo zentsimbi, ezinokulungiswa okanye zitshintshwe nokuba awunazo izakhono zobugcisa.
Njengayo nayiphi na ifanitshala ye-antique, kukho iiprojekthi ezifuna umsebenzi omninzi kunye nobuchule. Zombini umatshini owenziweyo kunye nefenitshala eyenziwe ngesandla inokucocwa kunye nokulungiswa, kodwa into oyizamayo inokuxhomekeka kubuchule bakho bobugcisa.
Ukutsala i-Antique Drawer
Cinga ngeXabiso kwangaphambili
Ngaphambi kokuba uzame nayiphi na iprojekthi yokubuyisela, vavanya izakhono zakho ngokuqinisekileyo kwaye uqwalasele ixabiso lesiqwenga oza kusebenza kuso. Unokufuna ukwazi ngexabiso lokuqokelelwa kwento leyo. Ikhabhinethi exabisa amawaka aliwaka eedola kwaye ifuna ukulungiswa okuncinci kunokuba lixabiso. Kodwa ifenitshala enexabiso elincinci le-antique kwaye inokufuna amakhulu eedola ukulungiswa kunokuba yinto okhetha ukungayilungisi.
iindlela zokuthi uxolo ngokulahleka kwakho
Ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo, unokufuna ukuwusa kwingcali kubuyiselo lovavanyo. Ukuba awuyazi ingcali ngokwakho, ungatsalela umnxeba ivenkile ye-antique yendawo okanye indlu yefandesi ye-antique kwaye ucele iingcebiso zabo.
Into ebalulekileyo ekufuneka uyikhumbule xa ulungisa ifanitshala ye-art deco kukugcina ubuninzi bendalo kangangoko kunokwenzeka. Ukupeyinta umphezulu, usebenzisa isitayile esingalunganga okanye ukusilela ukuthelekisa iinkuni kuya konakalisa ifanitshala yakho. Ezi ngcebiso zilandelayo ziya kukuqalisa kunyawo lwasekunene.
Ifanitshala ye-art deco ihlala inomphezulu veneer, onokutsalwa ngokulula okanye ucofwe. Ukuba ucoca okanye upolisha umphezulu, sebenzisa ilaphu elithambileyo ngokuluka ngokuqinileyo, kungenjalo ungayibamba imisonto kwi-veneer kwaye uyitsale kude nomphezulu wefanitshala.
Izitulo ze-Art Deco, iisofa kunye neetafile zinokuba namacandelo esikhumba okanye imiphezulu. Isikhumba siya kuqhekeka ukuba somile kakhulu, ngoko siphatha ubuncinci kanye ngonyaka ukusigcina sithambile. Sebenzisa iimveliso ezenziwe kuphela kwesikhumba, ezinje ngeSkidmore ukhilimu wesikhumba . Khumbula ukwenza isikhewu sovavanyo kuqala, ukuqinisekisa umbala ofanayo nakwisikhumba.
Iziqwenga zobugcisa zazidume ngenkangeleko yazo emenyezelayo kunye neenkuni ezintle. Olu hlobo lwefanitshala lunokuba nezinto ezininzi ezigqityiweyo, kubandakanya i-shellac okanye i-wax. Ukususa iileya ezakhiweyo ezihlala zigqibezela ukugqitywa koqobo, coca ngononophelo umphezulu ngemimoya yezimbiwa. Sula owomileyo, vumela umoya wome, emva koko wosule ngelaphu elicocekileyo. Idyasi elula Yenyosi izakukhusela umphezulu wefanitshala.
Nantoni na oyenzayo, ungasebenzisi ikhemikhali ukuhluba ifanitshala; oko kuya konakalisa i-veneer kwaye isiqwenga asiyi kulungiswa.
Ukuba uza kwenza ukulungiswa okulula kwifenitshala yobugcisa bakho, uya kudinga iimela zobugcisa, iglu yomchweli, izinto zokubamba ifanitshala kunye nobunzima.
Izitayile zefenitshala ye-art deco ibonakaliswe yimigca ecocekileyo, 'ingxangxasi' okanye imiphetho egosogoso, kunye neempawu zeglasi, i-chrome, i-aluminium, kunye neenkuni ezipholileyo kunye ne-veneers. Imikrwelo kunye neentsimbi, izixhobo ezilahlekileyo kunye neglasi eyaphukileyo ziingxaki eziqhelekileyo kwifenitshala ukusuka kweli xesha.
Uluhlu lwemibutho engama-501 c 3
Uninzi lweetafile ze-deco art zisebenzisa iiglasi ezingaphezulu, zibekwe phantsi kwisakhelo somthi. Ukuba iglasi iyaqhekeka, ichwechwe okanye ikrweleke, unokusikwa isiqwenga seglasi ukuze ilingane. Ezinye iziqwenga zobugcisa zeglasi zigcinwe endaweni yentsimbi ngomthi, zisenza ukususwa kunye nokutshintshwa kube lula. Khangela ingcali yokutshintsha iglasi kwindawo yakho, okanye unxibelelane nenkampani ekhethekileyo yeglasi Ukukhanya okucacileyo . Kwifenitshala yobugcisa be-deco, iglasi ngokwayo inombala (hayi ukuxhaswa okanye isilivere) ukuze ungabinakho ukufumana imibala yakho ngqo.
Iglasi ekrwitshiweyo inokulungiswa ngeendlela ezininzi. Ukukhanya okungaphezulu kokukhanya komhlaba, zama i-dab yothambiso lwamazinyo, kwaye uphawule amanqaku. Umqolo weJeweler isebenza ngokunjalo. Imikrwelo enzulu kusenokufuneka ikhutshwe yingcali, ngoko ke tsalela inkampani yakho yokulungisa iglasi ngoncedo.
Iglasi egxunyekweyo, ngamanye amaxesha efumaneka kwi-art deco china closets, phantse ayinakwenzeka ukuyibuyisela ngqo. Khangela umculi weglasi kwindawo yakho onokwenza i-acid-etching efunekayo ekubuyiseleni ngokupheleleyo, okanye unakoyizame ngokwakho.
Ngenxa yobudala babo, amabala esikhumba kwifenitshala yobugcisa be-deco kunokuba yinto enzima ukuyisusa. Ibala lomphezulu kwisitulo se-art deco okanye esofeni ngamanye amaxesha linokususwa ngesepha ethambileyo, njenge-Ivory. Zama isepha kwindawo engabonakaliyo yesikhumba kuqala kwaye uyiyeke yome. Emva kokuhlamba i-stain, bhuqa nge-bex. Ukufumana amabala anzima, zama Isusa ibala .
Ifanitshala ye-art deco yayihlala iphethe intsimbi okanye imilenze yokuhombisa eyenziwe nge-chrome, i-aluminium okanye imbiza yesinyithi. Unokuzihlambulula ezi zinyithi ngamanzi kunye nentwana yokuhlamba isitya esincinci okanye iviniga emhlophe. Gqibezela ngepolishi elula yeoyile yosana ukukhusela umphezulu.
Ukuphathwa okanye ukutsalwa kweedrowa ngamanye amaxesha kwakusenziwa ngentsimbi eyakhiwe kunye nokufakwa kweBakelite (iplastiki yokuqala). Ungathenga iikiti zokulungisa izakhiwo kwi-intanethi okanye kwiivenkile zokuzonwabisa. I-Bakelite ibuthathaka, ke uya kufuna ukuqaphela ukuthenga ukuzaliswa ngokutsha .
Umthi kwifenitshala yobugcisa be-deco unokucocwa kakhulu okanye ube ne-veneer esetyenziswayo kwizinto zokuhombisa okanye zejometri. Oku kunokubuyisela ifenitshala yobugcisa beplanga enomceli mngeni omkhulu, kodwa kukho ulungiso olulula onokulwenza ngezakhono ezisisiseko.
Ingakanani i-cubic 2 yeenyawo ze-mulch
Ukuba i-veneer iqhume phezulu okanye iphakanyisiwe, zama obu buchule: beka iphepha lephepha le-wax ngaphezulu kwecandelo eliphakanyisiweyo le-veneer kwaye emva koko ubeke iphepha elinzima (imvulophu yekraft okanye ikhadibhodi elula) ngaphezulu kwephepha le-wax. Gquma zonke ngelaphu elibhityileyo. Sebenzisa iseti yentsimbi kubushushu obuphakathi (akukho mphunga), cinezela phantsi ngononophelo kwaye ulinde imizuzwana embalwa. Phakamisa isimbozo, jonga ukuba ibhabhu ithe tyaba na, kwaye uphinde kwakhona njengoko kufanelekile de i-veneer igude. Emva koko beka ubunzima obunzima kwilaphu kwaye uvumele ukuphumla iiyure ezingama-48.
I-veneer evulekileyo inokutshintshwa okanye iphinde ifakwe. Usebenzisa ipeyinti emxinwa yesixhobo okanye esinye isixhobo, phakamisa ngononophelo i-veneer kwisiseko. Emva koko, susa yonke iglu endala. Ungasebenzisa amanzi afudumeleyo ukuthambisa iglu kwaye uyikrwele. Yandisa iglu yomchweli kwindawo ecocekileyo ngoku, kwaye ucinezele ngononophelo i-veneer ukuya ngasekupheleni. Sula ngokukhawuleza iglue engaphezulu. Ukunciphisa ubunzima be-veneer, okanye sebenzisa iifenitshala zefenitshala ukuyibamba endaweni xa iglue iyomile.
Ukuba ulahlekile isiqwenga se-veneer, kuya kufuneka ubeke endaweni yaso. Zama ukukhangela emaphethelweni asezantsi efenitshala apho unokufumana khona veneer engayi kuphoswa. Ungayinqumla ngommese wobugcisa uze uyincamathele kwindawo engenanto ngeglu yomchweli. Ukutshintshwa veneers inokufumaneka nakwiWoodcraft, apho amaxabiso aqala kwi- $ 10 nangaphezulu.
Ngamanye amaxesha ukulungiswa kungaphaya kwezakhono zakho, kodwa uyayithanda isiqwenga. Jonga ivenkile ethembekileyo yezinto zakudala kwaye ubone ukuba banokwazi na ngengcali yokulungisa kwindawo yengingqi egxile kwifenitshala yeenkuni. Tsalela umnxeba kwimyuziyam yakho yasekuhlaleni okanye kwimbali yoluntu kwaye ubuze ukuba basebenzisela bani ukulungiswa.
Ngelixa kukho izinto ezininzi ezithandekayo zefenitshala yobugcisa ngaphandle, uninzi lwayo alubizi kakhulu. Qiniseka ukuba unokufumana uqikelelo oluninzi ukuba kunokwenzeka, okanye ungaphelisa ukubhatala ngakumbi ukulungiswa kunoko kufanelekile.
Ukonwabela i-Art Deco yakho
Ifanitshala ye-art deco isitayile kunye ne-retro, ke sukuvumela iimlinganiso ezimbalwa okanye imikrwelo ikugcine ukuba ungayisebenzisi kwaye uyithande. Yenza ulungiso olulula kwaye wonwabele ifanitshala yakho kwiminyaka ezayo.
Khuphela Music Ukuthintela Umlilo Nokukhusela Inja Ingcali Udliwanondlebe Umntwana Imfundo Antique Tools Ne Hardware
usihlamba njani isinyithi
ixabisa malini i-mausoleum
Iibhasi zegreyhound zokuhamba ngeebhasi kunye neeshedyuli